यी १२ खानेकुरा जुन दुधसँग भुलेरपनि नखानुु-होस् ! कुन हुन् त्यी १२ खानेकुरा ? हेर्नु`होस् – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १५, २०७८ समय: १८:१६:०१
कालो दालसँग दुध हामीले प्राय दुध खानासँग प्रयोग गर्ने गर्छौ । तर, यदी खानामा कालो दालको प्रयोग गरिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा दुध नपिउनु राम्रो हुन्छ । यसले स्वास्थ्यलाई उल्टै असर गर्छ ।
– मूला, माछामासु जस्ता पदार्थसँग दुध दुधको साथमा मूला, माछामासु जस्ता पदार्थ नलिनुहोस् । यी चीज दुधसँग प्रयोग गर्दा यसले झन् नकारात्मक अ-सर पर्छ ।
यसको प्रयोगले तपाइको छालामा सम-स्या देखिन सक्छ । माछा निकै गर्मी चीज हो तातो चिसोको एकैपटक शरीरले पचाउँन सक्दैन र सेतो दाग वा ‘फ्लेरी’ हुन शुरु गर्दछ ।नुन र करेलासँग दुध दुधसँग नुन र करेला खानु पनि फाइदाजनक हुँदैन । यसले स्वास्थ्यलाई नकारात्मक अ-सर गर्छ ।
-तिलको सेवनसँग दुध दुधसँगै तिलको सेवन गर्नु पनि हा-निकारक हुन्छ । यसले छालाको रो-ग आउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । कागतीसँग दुध दुधसँग कागती लिनु पनि निकै हा-निकारक हन्छ ।
आयुर्वेद विशेषज्ञहरुका अनुसार दूध बिहानै वा राति सुत्नुअघि पिउनु मुनासिब हुन्छ । यसबाट अत्यधिक लाभ लिनका लागि यसमा अश्वगन्धा वा त्रिफला मिलाएर पिउनुपर्छ । यसबाट तपाईं’लाई राति राम्रो निद्रा पर्छ भने आँखालाई पनि यसले फाइदा पुग्छ ।
गाईको दुधमा ९० प्रति’शत पानी गाईको दुध निकै पातलो हुन्छ । गाईको दुधका ९० प्रतिशतसम्म पानी हुन्छ । जसले शरी’रमा आवश्यक पानीको मात्रा पुरा गर्न सहयोग गर्छ ।
– दुध र बेसारको प्रयोगले हा’म्रो शरीरमा भएका हा-निकारक तत्व बाहिर निस्कन्छन् । विशेषगरी र-गतमा भएको हा-निकारक तत्व तथा कलेजोलाई सफा राख्न बेसार र दुधले सहयोग गर्दछ ।
-बेसार र दुध मिसाएर खाँदा शरी’रका जोर्नी दुख्ने सम-स्या पनि हट्छ । यसबाहेक बाथरो’गका कारण हुने सुजन’लाई पनि कम गर्दछ ।
-दैनिक’रुपमा एक गिलास दुधमा आधा चम्चा बे’सार मिसा’एर खाँदा प्रया’प्त मात्रामा क्या’ल्सियम प्राप्त हुन्छ । जसका कारण गर्दा हड्डी स्वस्थ तथा मजबुत हुन्छ ।
– बेसार हालेको दुध खाने हो भने क्यान्स’रका कारण मानव कोषमा भएको डि’एनएमा पर्ने अ’सर वा हा-नीलाई रोक्दछ भन्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ। यस बाहेक क्या-न्सर उप’चारमा प्रयोग गरिने केमोथेरापी प्रविधिको साइड इ-फेक्टलाई कम गर्दछ ।
– दुध र बेसार सेवनले कान दुख्ने स-मस्या पनि समाधान हुन्छ । शरीरमा रक्त सञ्चार-लाई बढाएर कान दुख्ने पी-डा कम हुने गर्दछ।
– छालासम्बन्धी विभिन्न सम-स्याबाट छुटकारा पाउनका लागि बेसार हालेको दुध उपयोगी मानिन्छ। दुध र बेसार मि’लाएर सेवन गर्ने हो भने पेटसम्बन्धी विभिन्न रो-ग निको हुन्छन्। पखला लाग्ने, पेट दु-ख्ने, ग्याष्ट्रि-क तथा अ-ल्सर जस्ता समस्याबाट पीडि-त बिरामी लाई बेसार अमृत समान मानिन्छ।
-म-हिनावारी भएको बेलामा पे’ट दु-ख्ने समस्या’बाट मुक्त हुन बेसार र दुध प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै ग-र्भवती अवस्थामा र-गत बग्ने समस्या’लाई पनि कम गर्दछ। सुत्के’री भएपछि सामान्य अव’स्थामा छीटो फर्कन पनि दुध तथा बेसारले सहयोग गर्द छ ।
-चिसोका कारण रुघाखो’की लाग्ने मानिसले बे’सार तथा दुध मिसाएर खाने हो भने चाँडो निको हुन्छ । अनुहारलाई चम्कि’लो बनाउन बेसार तथा दुधले सहयोग गर्दछ । बेसार’मा दुध मिलाएर अनुहारमा लगा’उने हो भने छाला चम्किलो हुन्छ।
-आयुर्वेद अनुसा’र बेसार प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो रग’त सफा हुन्छ । यसले र-क्त सञ्चार’लाई मजबुत बनाउनुका साथै रक्तनलीलाई सफा राख्दछ । यसबाहेक रगत पा’तलो बनाउन पनि सहयोग गर्दछ ।
– दैनिक एक गिलास दुध’मा आधा चम्मा बेसार मिला’एर पिउने हो भने शरी’रमा भएको अनावश्यक बोशो कम हुन्छ । यस कारण मोटोपन घटाउन पनि बेसार र दुध प्र’योग गर्न सकिन्छ। – हिमालयन दैनिक